USharma udale amahlathi angama-33 ngenqubo yakhe ekhethekile | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Indoda edala amahlathi eNdiya nayo ingakwenza engadini yakho
Impela abanye benu abasifundayo bazoyazi le ndaba ebhalwe nguJean Giono ebizwa ngokuthi "Indoda eyatshala izihlahla" elandisa indaba ka-Elzéar Bouffier, umalusi ongacabangi, yize ethembekile ngokuphelele, okwathi iminyaka eminingi ezinikele ekutshaleni izihlahla endaweni enkulu waseProvence futhi waphenduka waba yindawo egcwele impilo nohlaza okwakuyinkangala eyincithakalo. Indaba engakholakali ekhombisa ukuthi sinamandla kanjani okuguqula imvelo esiseduze nathi ngokubekezela okuncane nomsebenzi omuhle, anawo uShubhendu Sharma.
ISharma Wayeka umsebenzi wakhe wokuba ngunjiniyela ukuze atshale izihlahla impilo yakhe yonke. Kusetshenziswa indlela kaMiyawaki ukukhulisa izithombo bese kuguqula noma iyiphi indawo ibe yihlathi eliziphilisa eminyakeni embalwa. Ikwazile ukudala amahlathi angama-33 kulo lonke elaseNdiya eminyakeni emibili. Ngezansi sikukhombisa ukuthi ukwenze kanjani lokhu.
UShubhendu Sharma, unjiniyela wezimboni, uletha ithuba lokuletha ubunjalo behlathi engadini yakho. Konke kuqale ngesikhathi uSharma uzinikele ukusiza isazi semvelo u-Akira Miyawaki ukulima ihlathi embonini yakwaToyota lapho ayesebenza khona. Inqubo kaMiyawaki isetshenziselwe ukuvuselela amahlathi asuka eThailand aya e-Amazon, okwenza uSharma acabange ukuthi angenza okufanayo naseNdiya.
USharma waqala ukuzama imodeli futhi udale inguqulo ekhethekile yezwe lakhe ngemuva kokulungiswa okuhlukahlukene kusetshenziswa izakhiwo ezithile zenhlabathi ezikhethekile. Umzamo wakhe wokuqala wokwakha ihlathi wawusengadini yakhe e-Uttarakhand, lapho akwazi khona ukuyakha ngesikhathi sonyaka. Okumnike ukuzethemba okwanele ukuthi agxume ngokugcwele, ashiye umsebenzi wakhe, futhi achithe unyaka wonke ecwaninga indlela yakhe yokusebenza.
USharma wenza i-Afforestt, insizakalo yokuhlinzeka ngamahlathi emvelo, asendle nokuzimela ngo-2011. Ngamazwi kaSharma uqobo: «Umqondo bekuwukubuyisa amahlathi emvelo. Abagcini ngokuzimela bodwa kepha unokulungiswa okungu-zero«. Esinye sezinqumo zakhe ezinkulu kwaba ukuyeka umsebenzi wakhe njengonjiniyela ohola imali ephezulu kwaToyota ukuze atshale izihlahla impilo yakhe yonke.
Ukuqala kwakunzima, kepha manje iSharma ineqembu labantu abangu-6. I-oda labo lokuqala belivela kumenzi wefenisha waseJalimane obefuna ukuthi kutshalwe izihlahla eziyi-10000 43. Kusukela lapho, i-Afforestt isebenzele amakhasimende angama-54000 futhi batshala cishe izihlahla ezingama-XNUMX.
1 Isebenza kanjani i-Afforestt
Isebenza kanjani i-Afforestt
Ihlathi inikeza insizakalo ephelele yokulawula nokwenza izinto efaka izinto zokwakha, imishini, amathuluzi nakho konke okudingekayo kuphrojekthi kusetshenziswa indlela yeMiyawaki. Le nqubo iqala ngokuhlola inhlabathi bese ibheka ukuthi yini edingekayo ukuze ikwenze okulungile ukuqala ukutshala zonke izinhlobo zezitshalo kuwo.
Izwe Kufanele okungenani ube ngamamitha-skwele angama-93 ukuqala ukufunda yiziphi izinhlobo zezitshalo ne-biome ezidingekayo. Ngemuva kokuhlolwa, izitshalo zokuqala ezincane zilungiswa enhlabathini ene-biomass ukuyenza ithele kakhulu.
Okokugcina iqala inqubo yokutshala phakathi kwezinhlobo ezingama-50 kuya kwezingu-100 zezinhlobo zemvelo. Isigaba sokugcina sigxile ekufakeni umanyolo nokunisela le ndawo eminyakeni emibili ezayo, ngemuva kwalesi sikhathi, ihlathi ngeke lisadinga ukunakekelwa futhi lizozimela lodwa. Inzuzo enkulu ye-Afforestt imodeli yayo yezindleko eziphansi nezihlahla ezincane ezikhula cishe imitha elilodwa ngonyaka.
Ihlathi idale amahlathi angama-33 esewonke amadolobha ali-11 aseNdiya futhi ifuna ukwandisa leli nani. ISharma inezinhlelo eziningi zokukhulisa nokubeka lobu buchwepheshe ukuze abantu abaningi babusebenzise.
Kuhlela qalisa isoftware ngokususelwa ekubuyiseni imali ukuze noma ngubani ukwazi ukwengeza izinhlobo zezitshalo zakho zemvelo endaweni yakho kuthuluzi. Ngakho-ke lapho umuntu efuna ukutshala ihlathi lakhe, bazokwazi ukuthi kuzothatha ziphi izinhlobo ukuze likwazi ukuzimela ngokwalo.
Enye yemibono yakhe ukudala indawo lapho ungakhetha khona isithelo esivandeni sakho noma icebo kulula kunokuthenga emakethe. Isinyathelo esithandekayo sokwakha amahlathi angadingi ukunakekelwa nokuthi uma ufuna ukwakha elakho ungalivakashela web noma uthinte uSharma uqobo ku info@afforestt.com.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Indoda edala amahlathi eNdiya nayo ingakwenza engadini yakho
Ngikuthandile okuthunyelwe kwakho, kuyathakazelisa kakhulu. Ngenkathi abanye bezinikele ekugawuleni amahlathi wonke, abanye bayadala. Ngiyawuthanda umqondo.
Ngiyabonga Beatriz! Uma esikhundleni sokubhubhisa sidalile, sonke singangcono
Ngiyabonga Manuel. Lokhu okuthunyelwe kungenze ngamomotheka. Ngafaka inkanyezi lapho ngifuna ukubeka u-5 kepha akusavumi ukuthi ngilungise. Ngiyabonga
Akukho okwenzekayo! Into ebalulekile ukuthi ukuthandile okuthunyelwe: =)
UCarlos Toledo kusho
umbono omuhle kakhulu
Ngisebenza enkonzweni lapho singakwenza khona lokhu
I-World's First Thorium Reactor yango-2016 Enikeza Amandla eNyukliya Aphephe Futhi Ashibhile